Soo dejisan Blender 2.78 – Vessoft
Soo dejisan Blender
Shied – software ah in ay sawiro 3D shaqeeyaan. Software waxaa ka mid ah qormooyin badan oo qalab si creat Model 3D, dhaqdhaqaaq, Rendering, video processing iwm shied ku jira engine ciyaar, kuwaas oo isticmaala abuuri kara kulan 3D la saamaynta macquul ah oo faahfaahsan. Software waxa uu isticmaalaa Python ee afka barnaamij loogu abuuro qalab iyo prototyping, nidaam ee macquulka ah in kulan iyo qalabaynta ee hawlaha. Astaamaha sareeya ee shied lagu hirgeliyaa xira of daro abuuray by qorayaal software ama ay diyaariyeen dadka isticmaala.
Fursadaha shaqo balaadhan oo sawiro 3D
Taageerada tiro badan oo qaabab file
Creation of kulan 3D
Kartida in ay xirmaan daro ah
Blender Software la xiriira: